Eksodus 2 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
2 Ngelo xesha, kwasuka indoda ethile yendlu yakwaLevi yathabatha intombi yakwaLevi.+ 2 Wamitha umfazi lowo, wazala unyana. Wathi akubona indlela awayekhangeleka emhle ngayo, wamfihla+ iinyanga ezintathu.+ 3 Xa wayengasenako ukumfihla,+ wamthabathela umkhombe wemikhanzi, wawutyabeka ngebhitumene netela,+ wamfaka kuwo umntwana waza wawubeka phakathi kweengcongolo+ eludongeni loMlambo umNayile. 4 Ngokubhekele phaya, udade wabo wema mgama ukuze afumanise oko kuya kwenzeka kuye.+ 5 Ethubeni kwehla intombi kaFaro isiya kuhlamba umzimba kuMlambo umNayile, yaye abakhonzazana bayo babehamba ngakwicala loMlambo umNayile. Yawubona umkhombe lowo phakathi kweengcongolo. Ngoko nangoko yathumela ikhobokazana layo ukuba liye kuwuthabatha.+ 6 Yathi yakuwuvula yabona nanko umntwana oyinkwenkwe, elila. Yasikwa yimfesane nguye,+ nangona yathi: “Ngomnye wabantwana bamaHebhere lo.” 7 Wandula ke wathi udade wabo kwintombi kaFaro: “Ndingaya kukubizela na umfazi womHebhere oncancisayo, akuncancisele lo mntwana?” 8 Ngoko intombi kaFaro yathi kuye: “Yiya!” Ngoko nangoko intombi leyo yaya kubiza unina womntwana.+ 9 Yathi intombi kaFaro kuye: “Thabatha lo mntwana undincancisele yena, mna ke ndokunika umvuzo wakho.”+ Ngako oko umfazi lowo wamthabatha umntwana waza wamncancisa. 10 Wakhula umntwana. Ngoko wamsa kwintombi kaFaro, waba ngunyana wayo;+ yaza yamthiya igama elinguMoses, kuba isithi: “Ngokuba ndamrhola emanzini.”+ 11 Kwathi ke ngaloo mihla, akomelela uMoses, waphuma waya kubantakwabo, esiya kukhangela imithwalo yabo;+ yaye wabona mYiputa uthile ebetha umHebhere othile wakubantakwabo.+ 12 Ngoko wabhekabheka waza wabona ukuba akukho bani. Wandula ke wamxabela umYiputa lowo waza wamfihla entlabathini.+ 13 Noko ke, waphuma ngosuku olulandelayo waza wabona amadoda amabini amaHebhere esukuzana. Wathi kulowo wonileyo: “Ulibethelani na iqabane lakho?”+ 14 Wathi yena: “Umiselwe ngubani na ukuba ube yinkosana nomgwebi phezu kwethu?+ Ngaba uzimisele ukundibulala nam njengalaa mYiputa umbuleleyo?”+ Woyika ke ngoko uMoses waza wathi: “Ngokuqinisekileyo iyaziwa le nto!”+ 15 UFaro wayiva le nto, waza walinga ukumbulala uMoses;+ kodwa uMoses wabaleka+ wemka kuFaro waya kuhlala ezweni lakwaMidiyan;+ wafika khona wahlala ngasequleni. 16 Waye ke umbingeleli+ wakwaMidiyan eneentombi ezisixhenxe, yaye njengesiqhelo zeza kukha amanzi, zazalisa imijelo ukuze ziseze umhlambi kayise.+ 17 Bafika abalusi njengesiqhelo bazigxotha. Wasuka uMoses wazinceda iintombi ezo waza wawuseza nomhlambi wazo.+ 18 Ekufikeni kwazo ekhaya kuRehuweli+ uyise wadanduluka wathi: “Kutheni nafika ngokukhawuleza kangaka nje ekhaya namhlanje?” 19 Zathi zona: “Kukho mYiputa+ uthile oye wasihlangula esandleni sabalusi waza, ngapha koko, wasikhelela amanzi, wawuseza umhlambi.” 20 Ngoko wathi yena kwiintombi zakhe: “Uphi na? Bekutheni ukuze nimshiye loo mntu? Mbizeni, aze kudla isonka.”+ 21 Emva koko uMoses wavuma ukuhlala naloo ndoda, yaza yamnika uMoses uTsipora+ intombi yayo. 22 Kamva yazala unyana waza wamthiya igama elinguGershom,+ kuba, wayesithi: “Ndingumphambukeli ezweni lasemzini.”+ 23 Zaqengqeleka iintsuku zaninzi, wafa ukumkani waseYiputa,+ kodwa bona oonyana bakaSirayeli baqhubeka bencwina, bekhalaza ngenxa yokukhotyokiswa kwabo,+ yaye ukukhalela kwabo uncedo besebukhobokeni, kwanyuka kwaya kufikelela kuTHIXO oyinyaniso.+ 24 Ekuhambeni kwexesha uThixo wakuva+ ukugcuma+ kwabo waza wawukhumbula uThixo umnqophiso wakhe noAbraham, uIsake noYakobi.+ 25 Ngoko uThixo wabakhangela oonyana bakaSirayeli waza wabaphawula uThixo.